Zenkit: အဖွဲ့များ၊ စက်ပစ္စည်းများနှင့်ကုမ္ပဏီများအကြားလုပ်ငန်းများကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်း Martech Zone
Zenkit: အဖွဲ့များ၊ စက်ပစ္စည်းများနှင့်ကုမ္ပဏီများအကြားလုပ်ငန်းများကိုစီမံပါ
တနင်္လာနေ့မတ်လ 16, 2020 ကြာသပတေးနေ့, ဧပြီ 1, 2021 Douglas Karr
Wunderlist ၏ပိတ်ခြင်းသည်တရားဝင်ဖြစ်ပြီးနောက်အသုံးပြုသူအမြောက်အများသည်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုကိုရှာဖွေနေသည်။ ထောင်နှင့်ချီသောသူများသည်လက်ရှိရွေးချယ်စရာများကိုစိတ်ပျက်မိကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ကြရာ Zenkit ကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် လုပ်ဖို့ Zenkit ဒါကြောင့် Wunderlist အသုံးပြုသူများသည်အိမ်မှာပဲခံစားနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ app ရဲ့အင်္ဂါရပ်တွေနဲ့အလိုအလျောက် interface က Wunderlist နဲ့အရမ်းဆင်တူတယ်။
ယနေ့အက်ပလီကေးရှင်းများသည်ရိုးရှင်းသောစာရင်းများ (ဥပမာ - Wunderlist, Todoistဒါမှမဟုတ် လုပ်ရန် MS) သို့မဟုတ်မျိုးစုံအမြင်များနှင့်အတူရှုပ်ထွေးသောစီမံကိန်းကိုစီမံခန့်ခွဲမှု tools များ (ကဲ့သို့သော ရှုံ့ချသည် or JIRA) ။ သို့သော်အဖြစ်မှန်မှာကွဲပြားခြားနားသောလုပ်သားအမျိုးအစားများသည်အမျိုးမျိုးသောကိရိယာများလိုအပ်သည်။ တစ်ခုတည်း app တစ်ခုကအားလုံးကိုလုပ်နိုင်သလဲ
Zenkit သည် ၂၀၂၀၊ မေလ ၆ ရက်နေ့တွင် Wunderlist ကိုမရပ်တန့်မီ Zenkit To Do အသစ်ဖြစ်သောသူတို့၏လုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမှုအက်ပလီကေးရှင်းကိုစတင်မိတ်ဆက်သည်။
Zenkit To-Do Zenkit နှင့်ပေါင်းစည်းသည်။
Zenkit (စူပါရိုးရှင်းသော) လုပ်ဆောင်ရန်အက်ပ်သည်မူလ Zenkit ပလက်ဖောင်းနှင့်အပြည့်အဝပေါင်းစပ်ထားသည်။ ဒါကြောင့်ယခုမှ စ၍ သင်သည်သင်၏အလုပ်များကိုလုပ်ဆောင်ရန်အသုံးချပရိုဂရမ်တွင်လုပ်နိုင်သည် (သို့) Kanban နှင့် Gantt ဇယားများကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောအမြင်များကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ ထပ်တူပြုခြင်းမရှိ၊ သွင်းကုန်မရှိ၊ အက်ပ်အားလုံးသည်ဒေတာစတိုးတစ်ခုမျှဝေသည်။ ၎င်းသည်ကွဲပြားသောအဆင့်များမှလူများကိုအတူတကွခေါ်ဆောင်လာနိုင်သည်။ သူတို့၏စီမံချက်ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ပါသောမန်နေဂျာများသည် ၄ ​​င်းတို့လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်လုပ်ငန်းတာဝန်များကိုအဖွဲ့ ၀ င်များထံသို့စုစည်းနိုင်သည်။
Zenkit နှင့် Zenkit Plus တို့၏ထူးခြားချက်များမှာ -
လှုပ်ရှားမှုခြေရာခံခြင်း - လှုပ်ရှားမှုများကိုသူတို့ဖြစ်ပေါ်လာသည်နှင့်အမျှစောင့်ကြည့်ပါ။ သင်၏အဖွဲ့များ၊ စုဆောင်းမှုများနှင့်တစ် ဦး ချင်းစီ၏ပစ္စည်းများတွင်ဖြစ်ပျက်နေသောအရာအားလုံးကိုကြည့်ပါ။
အဆင့်မြင့်အုပ်ချုပ်ရေး - SAML အခြေပြု SSO ကိုအသုံးပြုပါ၊ အသုံးပြုသူများကိုစီမံချက်များနှင့်စီမံခန့်ခွဲပါ။
စုစည်းခြင်း - သင်၏အချက်အလက်များကိုအလျင်အမြန်ခြုံငုံသုံးသပ်နိုင်ရန်အတွက်မည်သည့်နံပါတ်ကွက်လပ်အတွက်မဆိုပေါင်းစပ်မှုများကိုကြည့်ရှုပါ။
လုပ်ငန်းများကိုသတ်မှတ်ပါ - သင်၏အဖွဲ့ ၀ င်များကိုတာဝန်ပေးခြင်းဖြင့်လုပ်ငန်းများကိုအလွယ်တကူလွှဲပြောင်းနိုင်သည်။ အလုပ်အသစ်တစ်ခုကိုသူတို့အာရုံစူးစိုက်ရန်လိုအပ်သည်နှင့်ချက်ချင်းအကြောင်းကြားပါ။
အစုလိုက်လုပ်ဆောင်ချက်များ - ပစ္စည်းမျိုးစုံရှိမည်သည့်ကွက်လပ်၏တန်ဖိုးကိုမဆိုဖယ်ရှား၊ ဖယ်ရှားပါ။ ထပ်မံငွီးငှေ့ဖှယျ data တွေကိုလုပ်နေတာမှီဝဲဘယ်တော့မှမ!
ပြက္ခဒိန်ထပ်တူပြုခြင်း - နောက်ထပ်ချိန်းဆိုခြင်းကိုဘယ်တော့မှမမေ့ပါနှင့်။ Zenkit ၏ Google Calendar ပေါင်းစည်းခြင်းဆိုသည်မှာသင်၏ပြက္ခဒိန်များသည်အမြဲတမ်းထပ်တူပြုခြင်းဖြစ်သည်။
စစ်ဆေးရမည့်စာရင်း - subtasks များကိုခြေရာခံရန်အမြန်လမ်းလိုအပ်ပါသလား။ စစ်ဆေးရမည့်စာရင်းကိုသုံးပါ။ တိုးတက်မှုကိုအမြင်အာရုံကိုခြေရာခံပြီးသူတို့ပြီးမြောက်သွားသည်နှင့်အမျှအရာများကိုမှတ်သားပါ။
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် - လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၊ မိသားစုနှင့်မိတ်ဆွေများကိုသင်၏စီမံကိန်းများတွင်သင်နှင့်အတူပူးပေါင်းရန်ဖိတ်ခေါ်ပါ။
ရောင်စုံပစ္စည်းများ - သင့်ပစ္စည်းများကို၎င်းတို့ကိုအရောင်ခြယ်ခြင်းဖြင့်ထင်ရှားစေပါ။ ရဲရင့်ပြီးတောက်ပသောအရောင်များဖြင့်လုပ်ငန်းများကိုအလွယ်တကူခွဲခြားနိုင်သည်
မှတ်ချက်များ - သင်၏အဖွဲ့နှင့်စကားဝိုင်းတွင်ပူးပေါင်းပါဝင်ပါ။ အမှားတစ်ခုလုပ်ခဲ့သလား လူတိုင်းမှန်ကန်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေရအောင်မှတ်ချက်တွေကိုတည်းဖြတ်ပါ။
စိတ်ကြိုက်နောက်ခံ - သင်နှင့်သင်၏အသင်းအတွက် Zenkit ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပါ။ Zenkit Plus သို့အဆင့်မြှင့်ခြင်းဖြင့်သင်၏နောက်ခံနှင့်ပုံများကိုထည့်ပါ။
Desktop အက်ပလီကေးရှင်းများ - လှပပြီးစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုကင်းသော macOS, Windows နှင့် Linux အတွက် app တစ်ခု။ လျင်မြန်စွာပေါင်းထည့်သောအလုပ်များ၊ ဖန်သားပြင်မျိုးစုံဖွင့်ပြီးအော့ဖ်လိုင်းအလုပ်ပြီးအောင်လုပ်ပါ။
Drag and Drop ပြုလုပ်ပြီး - သင်၏ပရောဂျက်များကိုအလိုလိုသိအောင်စုစည်းပြီးသင်ဆွဲယူ။ တိုးတက်သည်နှင့်အမျှအရာဝတ္ထုများကိုရွေ့လျားပါ။
ငွေကောက်ခံရန်အီးမေးလ် - အလုပ်တစ်ခုကို Zenkit သို့တိုက်ရိုက်အီးမေးလ်ပို့ပြီးထူးခြားသောအီးမေးလ်လိပ်စာတစ်ခုဖြင့်အလုပ်များကိုသတ်မှတ်ပါ။ သင်၏ Inbox မှပစ္စည်းအသစ်များကိုဖန်တီးပါ။
အကြိုက်ဆုံး - သင့်အကောင့်ကိုဖြတ်ပြီးပစ္စည်းများကိုတစ်နေရာတည်းတွင်ခြေရာခံရန်နည်းလမ်းတစ်ခုလိုအပ်ပါသလား။ သူတို့ကိုအနှစ်သက်ဆုံးအဖြစ်မှတ်သားပါ။ သို့မှသာလျှင်သင်အလွယ်တကူရယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
file sharing - အတူတူအလုပ်လုပ်ပါ။ သင်၏ Desktop မှသို့မဟုတ်သင်အကြိုက်ဆုံး cloud သိုလှောင်မှု ၀ န်ဆောင်မှုများမှစာရွက်စာတမ်းများနှင့်ပုံများကိုမျှဝေပါ။
ရေစစ် - Zenkit ၏အစွမ်းထက်သောစစ်ထုတ်ကိရိယာများကိုသင်အသုံးပြုနေသည်ကိုရှာဖွေရန်လျင်မြန်စွာတူးပါ။ စိတ်ကြိုက်အမြင်များဖန်တီးရန်မကြာခဏအသုံးပြုသောစစ်ထုတ်သည့်အရာများကိုသိမ်းဆည်းပါ။
နည်း - မည်သည့်စုဆောင်းမှုမှမဆိုဆက်သွယ်၊ ပေါင်းစပ်။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်မည်သည့်နံပါတ်နယ်ပယ်သို့မဟုတ်ရည်ညွှန်းချက်ကိုမဆိုသုံးပြီးဖော်မြူလာများကိုဖန်တီးပါ။
Gantt ဇယား - နောက်ကျကျန်နေသေးသော ဦး ဆောင်လမ်းပြ၊ မှတ်တိုင်များ၊ အရေးပါသောလမ်းကြောင်းနှင့်အခြားအရာများပါ ၀ င်သည့်ရှုပ်ထွေးသောစီမံကိန်းများကိုအချိန်ဇယားအတိုင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းစီစဉ်ပါ။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပြက္ခဒိန် - စီမံကိန်းများစွာကိုလုပ်ခြင်းလား။ စုဆောင်းမှုအားလုံးတွင်အလုပ်များနှင့်အဖြစ်အပျက်များကိုခြေရာခံရန်နည်းလမ်းတစ်ခုလိုအပ်ပါသလား။ တခါတလေမှာအရာအားလုံးကိုတစ်နေရာတည်းမှာတွေ့ဖို့ပဲလိုတယ်။ “ My Calendar” ကိုထည့်ပါ။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရှာဖွေရေး - ပစ္စည်းတစ်ခုကိုမြန်မြန်ရရန်လိုသလား။ မော်ကွန်းတင်ထားသောပစ္စည်းများမှရှာဖွေလိုပါသလား။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရှာဖွေရေးစက္ကန့်အတွင်းဘာမှရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
Labels: - Zenkit တံဆိပ်နယ်ပယ်များသည်ပစ္စည်းများကိုခွဲခြားရန်၊ ဦး စားပေးသတ်မှတ်ရန်၊ တိုးတက်ရန်ခြေရာခံရန်နှင့်များစွာသောအရာများအလုံအလောက်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသည်။ သင်၏ Kanban ပျဉ်ပြားများကိုသင်ဖန်တီးထားသောမည်သည့်တံဆိပ်ခတ်မဆိုဖွဲ့စည်းပါ။
ဖျောပွထား - အရေးကြီးသောအသစ်ပြောင်းခြင်းအကြောင်းအခြားအဖွဲ့ ၀ င်များကိုချက်ချင်းအကြောင်းကြားရန်လိုအပ်ပါသလား။ သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကို ping လုပ်ရန် @mentions ကို သုံး၍ သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ ၀ င်များကိုစကားလက်ဆုံပြောဆိုစေမည်။
မိုဘိုင်း App များ Zenkit ကိုအသုံးပြုပါ။ ဆက်သွယ်မှုမရှိပါ ပြဿနာမရှိပါဘူး။ iOS နှင့် Android အတွက် Zenkit အော့ဖ်လိုင်းတွင်အလုပ်လုပ်သည်။ သင်ပြန်လည်ချိတ်ဆက်သောအခါစည်းညှိသည်။
အသိပေးချက်များ - သတိပေးချက်များသည်သင့်ကိုအာရုံပျံ့လွင့်စေမည့်အစားကူညီပေးပါ။ သင်လိုအပ်သည့်သတင်းအချက်အလက်၊ မည်သည့်အချိန်တွင်သင်လိုအပ်သည်ကိုသိရှိရန်သင်၏သတိပေးချက်များကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပါ။
ထပ်တလဲလဲပစ္စည်းများ - အပတ်တိုင်းသို့မဟုတ်လတစ်ကြိမ်သင်လုပ်သောအလုပ်များရှိပါသလား။ ရက်ချိန်းတစ်ခုကိုဘယ်တော့မှမလွတ်နိုင်အောင်ထပ်တလဲလဲလုပ်သည့်အလုပ်ကိုသတ်မှတ်ပါ။
ကိုးကား - လုပ်ဆောင်ရန်စာရင်းကဲ့သို့အသုံးပြုရန်လွယ်ကူသောအကောင့်တစ်ခုလုံးကိုစိတ်ကြိုက် relational database တစ်ခုဖန်တီးရန် collection များကိုဆက်သွယ်ပါ။ link တစ်ခုထက်ပိုပြီးအစွမ်းထက်သည်။ ကိုးကားချက်များကသင်၏အချက်အလက်များကိုတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ခြင်းပြုလုပ်သည်။
ကြွယ်ဝသောစာသားတည်းဖြတ်မှု - Zenkit ၏ရိုးရှင်းသောကြွယ်ဝသောစာသားအယ်ဒီတာသည်သင်၏အလုပ်ကိုမြှင့်တင်ရန်လှပသောစာသားများကိုဖန်တီးနိုင်သည်။ သင်၏စကားများထင်ရှားစေရန် HTML, markdown သို့မဟုတ်အခြေခံစာသားများကိုသုံးပါ။
shortcuts - ပစ္စည်းများကိုလျင်မြန်စွာထည့်ပါ၊ စိတ်မြေပုံအကိုင်းအခက်များကိုရွှေ့၊ Zenkit ဖြတ်လမ်းများနှင့်အခြားအရာများထည့်ပါ။
ခေါင်းစဉ်ခွဲများ - သတ်မှတ်ထားသောရက်စွဲများ၊ သတ်မှတ်ထားသည့်သုံးစွဲသူများနှင့်အခြားအရာများဖြင့်စာတန်းထိုးများကိုထည့်ပါ။
အမြင်များပြောင်းပါ - သင်၏ Kanban ဘုတ်ကိုမည်သည့်တံဆိပ်ဖြင့်မဆိုစာရင်းနှင့်အတန်းများဖြင့်စုစည်းပါ။ အသင်း ၀ င်များက ဦး စားပေးသော matrix ကိုဖန်တီးပါ။
အဖွဲ့တာ ၀ န်များ - သင်၏အဖွဲ့အတွက်စာတိုက်ပုံး။ သင်သို့မဟုတ်သင်နှင့်တွဲဖက်သူမည်သူမဆိုအားပေးအပ်ထားသောပစ္စည်းအားလုံးကိုကြည့်ရှုရန်တစ်နေရာ။ ရှုပ်ထွေးသောစီမံကိန်းများတွင်မရှုံးစေဘဲပစ္စည်းများကိုဖန်တီးပြီးအလိုအလျောက်သတ်မှတ်ပါ။
ဝီကီအသင်း - လှပပြီးအကြောင်းအရာကြွယ်ဝသောဝီကီများကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီဖန်တီးပါ။ ဝီကီအသင်းဝင်များနှင့်အချိန်နှင့်တပြေးညီပူးပေါင်းပါ။
တင်းပလိတ်များ - ဘယ်မှာစရမည်နည်း။ ကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး ၏စာအုပ်ထဲမှစာရွက်တစ်ရွက်ကိုယူပြီးကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေသည့်တင်းပလိတ်များထဲမှတစ်ခုကို download လုပ်ပါ။
လုပ်ရန်စာရင်း - မည်သည့်စီမံကိန်းကိုမဆိုလုပ်ရန်စာရင်းသို့ပြောင်းလဲပြီးသင်၏လုပ်ငန်းများကိုဖြတ်သန်းပါ။ လုပ်ငန်းများကိုပြီးပြည့်စုံစွာမှတ်သားပြီး၎င်းတို့အားစာရင်းအောက်သို့ရွှေ့လိုက်သည်ကိုကြည့်ပါ။
two-factor authentication - အချက်နှစ်ချက်ကိုစစ်ဆေးခြင်းဖြင့်သင်၏အကောင့်လုံခြုံမှုရှိမရှိသေချာအောင်လုပ်ပါ။ Zenkit အသုံးပြုသူများအားလုံးအတွက်ရနိုင်သည်။
အသုံးပြုသူအဆင့်များ - သင်၏အလုပ်၏လုံခြုံရေးကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်အဖွဲ့၏ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကိုမြှင့်တင်ရန်အသုံးပြုသူများအားအခန်းကဏ္ Ass များအပ်နှင်းပါ။
အော့ဖ်လိုင်းအလုပ်လုပ်ပါ - Zenkit ကိုအင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုရှိသလားသွားရင်သုံးပါ။ အော့ဖ်လိုင်းစနစ်ကိုလည်းဝဘ်ဗားရှင်းတွင်လည်းပံ့ပိုးထားသည်
Zapier Zenkit ၏ Zapier ပေါင်းစပ်မှုနှင့်အတူသင်အကြိုက်ဆုံးအက်ပလီကေးရှင်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ ၇၅၀ ကျော်ဖြင့်ပေါင်းစပ်ပါ။ Zapbook
Send Email ကိုမနှိပ်မီစစ်ဆေးရန်အီးမေးလ်စျေးကွက်အမှားများ
မေလ 6, 2012 မှာ 6: 06 pm တွင်
Douglas ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ မင်းရဲ့ပို့စ်မတိုင်ခင် Wunderlist ကို မတွေ့မိဘူး။ ငါပိုရှာရမယ်! ဖုန်းအက်ပ်တွင် နောက်ဆက်တွဲ ပို့စ်တစ်ခုကို သင်လုပ်မှာလား။ ပိုသိချင်ပါတယ်!